Ngwa Mica na Resin na plastic Indust | Lingshou
Ngwa Mica na Resin na Plasticlọ ọrụ rọba
(1) inggbanwe ngwa Njirimara nke Plastik
Chi mica nwere ike ịtụgharị ma mee ka ụzarị ọkụ na-enwu, yana ịmịkọrọ ma chebe UV, wdg. Ya mere, ọ bụrụ na ịtinye ala mgbochi mmiri mica dị elu na fim, ọ ga-esiri ike ọkụ ịpụ mgbe ọ banyesịrị, si otú a na-echekwa okpomọkụ na griin haus. na ihe nkiri plastic filin, wdg N'ime ngwa a, ihe dị ọcha na ihe owuwu nke mica ntụ ntụ dị ezigbo mkpa. N'otu aka, adịghị ọcha ga-ebelata mica nke mmetụta nkwalite ya, na-emetụta nghọta ya, mụbaa ọkwa irighiri ma belata ọkụ ịbanye na griin haus. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na mica adịghị mma na nchekwa dị njọ, yabụ na nsonaazụ ya igbochi radieshon na-adịghị mma. Gansu Gelan Chemical Technology Co., Ltd., nke Hong Kong Lee Group jiri mgbe ọ bụla jiri mgbochi mmiri mica mee ihe nkiri ugbo, naanị iji belata nghọta ya site na 2%.
Ọgwụ, ihe ntecha, nri na ngwaahịa ndị ọzọỌ dị mkpa ka ị chebe radieshon, ọkachasị ultraviolet, iji melite arụmọrụ nchekwa ha. Iji mee nke a, anyị nwere ike itinye fọkma ala mica ntụ ntụ zuru oke na-etinye n'ime ihe ndị a na-eji plastik. Nnukwu akwa mica na-ese ihe nwere ike ime ka ihe dịkwuo mma (mmetụta pellescent), na ntụ ntụ mica dị mma nwere ike wepu luster.
(2) Imeziwanye ikuku ikuku-Plastik
Wet ala mica ntụ ntụ nwere ezigbo mpempe akwụkwọ dị omimi, yana ọkpụrụkpụ ya na nanometers na dayameta-ọkpụrụkpụ ruru ruo 80 ~ 120 ugboro, si otú a nwee nnukwu igbochi mpaghara. Igwe na-eme ka ikuku nke plastik ga-abawanye nke ukwuu mgbe agbakwunye na akwa mica ntụ ntụ dị elu. Enwere ike iji plastik ndị dị otú ahụ, dị ka akwụkwọ patent si dị Karama Coke, karama biya, karama ogwu, ihe ihe eji egwu mmiri yana otutu ihe ihe eji eme ihe eji eme ihe.
(3) Imeziwanye Njirimara nke anụ ahụ na sistem
Akara ọkụ na fulawa nwere ike belata nrụgide nke ihe, nke dị ka ihe ndị na - agba ume na simenti na ihe anisotropic na ọtụtụ ihe na - eme ka ọ dịkwuo mma (rọba, rọba, resin, wdg). Ngwa ọ na-ejikarị bụ carbon carbon, mana eriri carbon dị oke ọnụ ma dị ụkọ na luster, yabụ, ọ siri ike itinye ya n'ọrụ.
Asbestos nwere oke oke na ngwa maka o nwere ike akpata kansa. Igwe nke nwere iko dị mma (dịka, dayameta nke 1 micron ma ọ bụ ọkwa nke nanometer) na-eche ọtụtụ ihe isi ike ihu na ọnụahịa ya dịkwa elu. Ihe ndozi di iche, tinyere micron quartz powder na kaolin ntụ nke juputara na ala mica enweghi oru a dika aja na okwute na ciment ciment.Naanị mgbe ị na-agbakwunye nchekwa dị ka mmiri ala mica ntụ ntụnke ahụ dị elu na dayameta-ọkpụrụkpụ ruru, ike nke tensile, ike mmetụta, na-agbanwe agbanwe, ihe ndị ọzọ eji arụ ọrụ, nkwụsi ike (dịka ọkụ ọkụ na ngbanwe ike ọgwụgwụ na ntughari), na mgbochi ịpụ ọrụ ga-aka mma.N’ezie otutu otutu ihe omumu banyere ihe ndia ka emeworo na Saiti ihe omumu. Otu isi bu nha nke nzacha.
Plastik (wdg, resin) nwere oke na ihe siri ike n’onwe ha. Ọtụtụ ụdị nke nzacha (dịka, talc ntụ ntụ) dị ala na ike ọrụ ọrụ ha. Kama nke ahụ, ịbụ otu ihe mejupụtara konkiri, mica dị oke mma na ike ọrụ. Ya mere, site na ịtinye ntụ ntụ mica ka ọ dị ka mmiri na plastik, nsonye nkwalite ahụ ga-abụ nnukwu ibu. Ogo nke dayameta-ọkpụrụkpụ bụ isi ihe maka mmelite mmelite nke ntụ ntụ mica dị elu.
Usoro njikwa nke ntụ ntụ mica nwere nnukwu ọrụ na ngwa a dị n'elu maka ọ nwere ike melite iguzosi ike kemịkal nke ihe, si otú a na-eme ka arụmọrụ nke ihe dịkwuo elu. Ọgwụ nchịkọta njikọ ziri ezi bụkwa isi ihe maka nkwalite akụ nke mica ntụ ntụ, yabụ na-agbanwe usoro mkpu mmiri nke resin. Iji akwa mica ntụ ntụ dị elu nwere ike ime ka ngwaahịa ndị ahụ bụrụ ihe na-enweghị ego. A na-etinye ụdị teknụzụ a n'ọtụtụ ụlọ ọrụ plastik, dịka n'ichepụta ngwaahịa dị elu, gụnyere akụkụ rọba nke igwe na ugbo ala, ihe eji arụ ọrụ ụwa, akpụkpọ anụ dị mpụga nke ngwa ụlọ, ihe ndị a na-eji ngwa, eji ya eme ihe kwa ụbọchị, wdg.
(4) Imeziwanye akụ na ụba ndị sitere na ngwaahịa
Mica nwere nguzogide eletriki di elu nke ukwuu, ya mere o bu ihe ndi n’ebughi oke ibu. Iji mica meziwanye ihe mkpuchi nke ihe bụ ihe ama ama ama. Maka imepụta ngwaahịa ngwaahịa mkpuchi elu dị elu, a ga-agbakwunye sistemu mgbochi mmiri ala mica dị ka ekwuputara n'elu, a ga-ezere ihe mica dị elu nke iron maka ọrụ mkpuchi ya dị ala. A sachapụbeghị mica nkụ kpọrọ nkụ ma nwee nnukwu ọdịnaya, yabụ adabaghị maka iji ya.
Ngwa nke ala mgbochi mmiri mica na plastik karịrị nnọọ nke ahụ. N'iji njiri mara ihe nke ahịhịa ala mica ntụ ntụ mee ihe, enwere ike ịmepụta ọtụtụ ngwaahịa ngwaahịa bara uru ọhụụ na teknụzụ ngwa. Dịka ọmụmaatụ, site na ịgbakwunye ntụ ntụ mica na plastik, ịrụ ọrụ obibi akwụkwọ na ngwongwo ngwakọta mejupụtara; site na igbada SnO2 n’elu ma ọ bụ site n’iji ọla kọpa mee ya, ntụ ntụ mica ga-adị ndụ ma nwee ike iji ya mee ngwaahịa na-akpụ akpụ na plastik; site na iji TiO2 kpuchie ya, mica ga-abụ isi awọ ma nwee ike iji ya mee ọtụtụ ngwa; site na agba agba, mica ga-abụ ọmarịcha mara mma; mica nwekwara ike melite ịrụ ọrụ lubrication nke ngwaahịa.